Endrik'io pejy io tamin'ny 1 Aprily 2019 à 05:56
Endrik'io pejy io tamin'ny 1 Aprily 2019 à 05:46 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 1 Aprily 2019 à 05:56 (hanova) (esory)
Ny fotoan'ny Advento dia misy Alahady efatra amin'ny ankamaroan'ny fiangonana fa enina kosa izany ho an'ny [[Kristianisma ortodoksa|Fiangonana ortodoksa]]. Ao amin'ireo Fiangonana manaraka ny fombam-pivavahana romana izay ampiasaina indrindra ao amin'ny Eglizy katolika dia samy manana ny lohahevitra voizina ny Alahady tsirairay.
Amin'ny Alahady voalohany dia miompana amin'ny Fiavian'i Kristy Fanindroany ny lohahevitra. Arehitra ny [[labozia]] voalohany amin'io andro io. Ireto ny vakiteny fanao amin'izany:
Amin'ny Alahady fahatelo dia mbola mikasika an'i Joany Batista ihany ny famakiana ny [[Filazantsara|Evanjely]], ireo vakiteny hafa dia momba ny fifaliana vokatry ny fiavian'ny Mpamonjy. Arehitra ny labozia fahatelo amin'io andro io. Ireto ny vakiteny fanao amin'izany:
Amin'nyNy Alahady fahefatra dia mifantokaifantohana amin'ny ny zava-nitranga momba an'i [[Maria (renin'i Jesoa)|Maria]] sy i [[Josefa (vadin'i Maria)|Josefa]] izay mitarika mivantana ho amin'ny [[Fahaterahan'i Jesoa|fahaterahan'i Jesoa]], ary ireo vakiteny hafa dia momba izany ihany koa. Arehitra ny labozia fahefatra amin'io andro io. Ireto ny vakiteny fanao amin'izany:
Fanao amin'ny fiangonana toy ny any [[Alemaina]] sy amin'ny faritra sasany ao [[Eoropa]] ny manantona ilay atao hoe "satrobolinahitry ny Advento" na "satroboninahitry ny Fiaviana" izay ametrahana labozia iray isan-kerinandro mandra-pahatongany ho efatra amin'ny andron'ny [[Noely]] (na [[Krismasy]])<ref name=":0" />. Matetika dia miloko mena ireo labozia ireo nefa misy ny mampiasa loko hafa toy ny manga, ny mavokely, ny volomparasy sns.satroboni
==== Ny hevitry ny satroboninahirasatroboninahitra sy ny labozia ====
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/969781"